Xuquuqda Biniaadanka - BBC Somali
Amnesty: boqolaal masaari ah ayaa la la'yahay
Laamaha ammaanka ee Masar ayaa ka dambeeyay boqolaal dad ah oo awood loo sheegtay lana waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen 13 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Amnesty: boqolaal masaari ah ayaa la la'yahay
Mareykanka oo ka hadlay radio Daljir
Xafiiska Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo ka walaacsan xirista Radio Daljir oo 23kii bishan la xiray.
24 Juunyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Mareykanka oo ka hadlay radio Daljir
Kacdoonkii Soweto 16-kii June 1976
16-kii bishii June 1976, kumanyaal ardey Koonfur Afrika ah ayaa isugu soo baxay jidadka magalaada Soweto si ay uga mudaharaadaan xukunkii caddaankii tirada yaraa ee dalkaasi.
16 Juunyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Kacdoonkii Soweto 16-kii June 1976
Baarayaasha QM oo eedeeyay IS
Baarayaasha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa markii ugu horreysay ku eedeeyay kooxda la baxday dowladda Islaamiga inay galeen gumaad ka dhan ah dadka Yazidi ee ku nool dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Baarayaasha QM oo eedeeyay IS
Dadweynaha oo soo dhaweynaya qaxootiga
Baaris cusub, ayaa muujineysa in muwaadiniinta dalal badan ay si weyn diyaar ugu yihiin inay soo dhaweeyaan qaxooti
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dadweynaha oo soo dhaweynaya qaxootiga
Taliban oo xukun dil ah fulisay
Maxkamad ay Talibanku leeyihiin, ayaa xukun dil ah ku fulisay haweeney gobolka Jowzjan ee dalka Afghanistan.
7 Maajo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taliban oo xukun dil ah fulisay
Diiwaan galinta xukunka dilka oo kordhay
Sanadkii hore tirada dadka xukunka dilka lagu fuliyay ee Amnesty International ay diiwaan gelisay waxay sare u kacday in ka badan boqolkiiba konton marka la barbardhigo sanadkii kaas ka horreeyay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Diiwaan galinta xukunka dilka oo kordhay
Oxfam: hala kordhiyo dib u dejinta Suuriyaanka
Dawladda UK iyo dalalka kale ee qaniga ah waa in ay sare u qaadaan tirada qaxootiga Suuriyaanka ah ee ay qaataan, sidaas waxaa ku baaqaysa Oxfam.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Oxfam: hala kordhiyo dib u dejinta Suuriyaanka
Kerry oo Masar ku eedeeyay xadgudub
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, John Kerry waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Masar oo sii xumaaneysa.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Kerry oo Masar ku eedeeyay xadgudub
Tirada yar ee ka lacag badan dunida inteeda kale
Hogaamiyayaasha dunida ayaa ku kulmaya Davos todobaadkan si ay uga wadahadlaan dhaqaalaha dunida. Mid ka mid ah qodobada ay ka hadlayaa waxaa ka mid ah sinnaan la’aanta milkida. Waxaanu eedaynaa qaabka qaybsiga hantida iyo qaabka ay isku badalayso. 19 Jannaayo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Tirada yar ee ka lacag badan dunida inteeda kale